Nnyefe siri ike nke 100
Enweghị Okwuntughe achọrọ
100% Nchekwa & Nkeonwe
Kedụ uru dị n'ịzụta Oge Ncheta YouTube?
Nyere Aka Re Iru Hobọchị 4,000 Iji Tinye Moneti Gị Channel
Lelee awa iji bulie ogo YouTube & Google Search
Ntinye ọrụ na 24-72 awa & na-aga n’ihu kwa ụbọchị ruo mgbe ha zuru ezu
Nyefe Ọsọ & Mbufe
Na-arụ ọrụ kachasị mma Ọ bụrụ na ị nyefere vidiyo vidiyo 15+
Ụzọ ngwa ngwa iji bulie awa elekere YouTube
Dị ka akụkọ Statista si kwuo, a na-ebugo ihe karịrị awa 500 vidiyo na YouTube kwa nkeji. N'inwe ọtụtụ ọdịnaya, usoro ịkwado nsonaazụ ọchụchọ dị mkpa na-esiwanye ike. Ruo afọ ole na ole gara aga, YouTube na-adabere na ọnụọgụ nlele na vidiyo iji hazie nsonaazụ ọchụchọ yana vidiyo ndị akwadoro. Usoro ikpe nke YouTube agbanweela na, ugbu a, YouTube na-eburu n'uche ọtụtụ metrik iji tụọ nsonaazụ ọchụchọ.
A na-ahụta metrik 'Watch Time' ka ọ bụ ihe mbụ maka ikpebi ọkwa na YouTube. YouTube na-enyocha oge ndị mmadụ na-etinye na-ekiri vidiyo na ma ha na vidiyo gị na-emekọrịta ihe ma ọ bụ na ha anaghị emekọrịta ihe. Ọ bụghị naanị maka echiche, ọ bụ ogologo oge ndị mmadụ ga-anọ na vidiyo gị. Ọ bụ ezie na ịbawanye echiche gị dị mfe, ọ nwere ike bụrụ ihe siri ike ịbawanye oge nche gị n'ụzọ nkịtị. Nke a bụ ebe YTpals nwere ike inyere gị aka. Ị nwere ike zụta awa elekere YouTube sitere na YTpals iji bulie ogo vidiyo YouTube na Google gị.
Ntuziaka zuru oke iji lelee oge
Oge nche bụ metrik na-ekpebi ogologo oge ọdịnaya gị na-eme ka ndị na-ekiri gị na-etinye aka. Ka iwelie oge nche gị, ị ga-achọ ime ka vidiyo gị pụta ìhè maka ndị na-ekiri ya. Tupu anyị eruo ụzọ nke ịbawanye oge nche, ka anyị leba anya na nkenke akụkọ ihe mere eme nke YouTube ogo algọridim.
Ruo afọ 2012, a na-ahụta ihe bụ́ isi maka ọganiihu nke vidiyo dị ka ọnụ ọgụgụ nlele. Ekpebiri ogo vidiyo ndị a site na ọnụọgụ nlele enwetara. Nke a na-eduga n'ịbawanye ojiji nke iji baits pịa, nwere aha vidiyo na obere mkpịsị aka bụ nke kacha emetụta ịnweta ọpịpị. Ọ bụ ezie na vidiyo ndị a pịa bait ga-enweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nlele, ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị ga-adị ala. Ọnụ ego bounce dị elu gosiri na ndị ọrụ enweghị afọ ojuju na ntụnye ahụ. N'ihi ya, a chọpụtara na ọnụ ọgụgụ nlele abụghị ihe kacha egosi ịdịmma ma ọ bụ mkpa vidiyo.
YouTube ghọtara na ihe kacha mma maka vidiyo bụ oge onye ọrụ na-etinye na vidiyo ahụ. Mgbe onye na-ekiri na-ekiri vidiyo ruo na njedebe, ọ na-egosi afọ ojuju dị elu. Ebe ọ bụ na ihe ka ọtụtụ n'ime ego YouTube na-enweta bụ mgbasa ozi, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya na ọ chọrọ ka ndị na-ekiri ha kirie vidiyo ruo ogologo oge enwere ike. Ndị mgbasa ozi na-amata YouTube maka ngwa ahịa dị mma yana eziokwu na ọ bụ ebe ndị na-ege ntị na-ekiri vidiyo kwa ụbọchị.
Ọ bụ n'October 2012 ka ewepụtara algọridim YouTube ọhụrụ. Algọridim ọhụrụ a, dabere na 'Watch Time' tụbara n'uche vidiyo ndị mere ka ndị na-ekiri ihe na-etinye aka. YouTube malitere ịhazigharị ọkwa vidiyo ndị ahụ wee kwụọ ndị gosipụtara na ha na-emekọ ihe ma debe ndị na-ekiri na YouTube ogologo oge. Site na algọridim ọhụrụ ahụ, a naghị ele ọnụ ọgụgụ nlele anya dị ka onye na-ekpebi ọdịnaya ogo.
Kedu ihe bụ Oge nche?
Oge nche so na ọtụtụ metrik YouTube na-eji maka ebumnuche SEO. YouTube na-akọwa Oge nche dị ka mkpokọta oge ndị na-ekiri gị na-etinye na-ekiri vidiyo ahụ. Akwụkwọ YouTube Onye Okike Playbook kwukwara na vidiyo ndị na-abawanye oge nche na saịtị ka a na-eme ka ọ dị elu na nsonaazụ ọchụchọ yana vidiyo tụrụ aro. Ọ nweghị otu atụmatụ enwere ike iji mee ka ọnụ ahịa ọwa gị na vidiyo dị n'anya ndị na-ekiri ya. Ọ chọrọ ụzọ dị iche iche. Ị nwere ike ịzụta awa elekere YouTube n'aka YTpals. Tupu anyị eruo nke ahụ, enwere ụfọdụ ihe gbasara oge nche YouTube ị kwesịrị ịmara onwe gị nke ọma.
Nke mbụ, ọnụego njide ndị na-ege ntị na nkeji echere elele bụ ihe abụọ nwere njikọ chiri anya. A na-atụle oge ndị na-ekiri na-etinye na ọdịnaya gị na nkeji ma ọ bụ sekọnd. Ọnụego njide ndị na-ege ntị na-ezo aka na nkezi oge onye nlele na-etinye na ọdịnaya gị. Ọnụego njide dị elu na-egosi ike vidiyo iji jide n'aka onye ọrụ. YouTube na-enyocha ụzọ vidiyo gị si etinye aka na oge nche nke onye ọrụ na saịtị ahụ.
Nke abuo, YouTube na-akwado Watch Time kwa oge onye ọrụ. Oge nche abụghị naanị maka ọnụọgụ vidiyo gị na-elele mana ntinye vidiyo gị na oge nlele otu onye ọrụ na YouTube. Oge nnọkọ a kapịrị ọnụ nke ihe nkiri dị oke mkpa maka YouTube, n'ihi na ebumnuche ha bụ ime ka ndị na-ekiri ha nwee afọ ojuju na itinye aka na saịtị ahụ ogologo oge.
Ị gaghị enweta ụgwọ ọrụ site n'oge nlele ma ọ bụrụ na ịgbatị vidiyo 30 sekọnd n'ime nkeji 20. Isi ihe bụ ime vidiyo na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka ndị na-ekiri ha nọrọ ogologo oge. YouTube na-elele ọdịnaya nke na-abawanye oge nche nke ndị ọrụ na saịtị ahụ.
Ọmụmaatụ maka ịghọta oge nche YouTube
Onye ọrụ na-achọ ihe akpan akpan na YouTube wee buru ụzọ lelee vidiyo gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, onye ọrụ na-ekiri vidiyo ndị metụtara ya. N'okwu a, oge nlele ga-agụnye oge nlele nke etinyere na usoro vidiyo ahụ. Oge nche ga-emetụta na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ndị na-ekiri ha hapụrụ vidiyo ma gaa n'ihu na-eme ọchụchọ ọzọ. Oge nche ga-emetụta nke ọma ma ọ bụrụ na ọdịnaya vidiyo gị mepụtara nnọkọ nlele YouTube ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, mmetụta nke YouTuber guzobere ga-akpali oge nlele ka ndị ọrụ na-aga n'ihu na-ekiri vidiyo YouTuber ndị ọzọ metụtara ya.
Mkpa oge nche YouTube
Ugbu a anyị maara maka oge nche, ka anyị lelee mkpa oge nche dị maka onye okike ọdịnaya -
Ọdịnaya dị elu: Mgbe ndị na-ekiri na-anọ azụ na vidiyo gị niile ruo ọgwụgwụ, ọ na-egosi eziokwu na YouTube ọdịnaya gị dị elu. YouTube ga-emecha kwado vidiyo gị wee bulie ogo ha site n'ịkwalite ha dị ka vidiyo atụpụtara.
monetization: Maka ịkpata ego na YouTube site na imekọ ihe ọnụ site na AdSense, ọ dị mkpa na metrik oge elekere gị na-adọrọ mmasị. Dịka iwu YouTube ọhụrụ siri dị, ọdịnaya gị ga-achọ ịnwe opekata mpe awa elekere 4,000 kwa afọ na YouTube ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta uru ego.
Afọ afọ onye ọrụ: Ọ bụrụ na oge nlele na ọwa YouTube gị na-abawanye, ọ pụtara na ndị na-ekiri gị nwere obi ụtọ na ọdịnaya gị. Ọ na-egosi eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike ịdọta ndị na-ege ntị nke ọma.
Otu esi achọpụta oge elekere ọwa gị
Tupu ị chọpụta ụzọ isi bulie oge nche gị, ọ dị mkpa ileba anya na ọnụ ọgụgụ nke ọwa gị. Maka nke a, ịkwesịrị imepe Studio Onye Okike na YouTube wee mepee taabụ nyocha site na menu aka ekpe. Na ibe nyocha, họrọ nhọrọ nlele ụbọchị 365 gara aga na ala nke eserese ahụ. Ị ga-enwe ike ịhụ ngụkọta nkeji ndị mmadụ ejirila na-ekiri ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ gị na-egosi awa 240,000 ma ọ bụ 4,000, mgbe ahụ ị gaferela ụzọ maka itinye ego na ị nọ n'ụzọ ziri ezi.
Iji nyocha iji ghọta njide ndị na-ege ntị
A na-atụ anya na ndị na-ege gị ntị ga na-adaba mgbe niile ka oge na-aga, mana enwere isi ihe ụfọdụ na vidiyo ebe njigide ndị na-ege gị ntị nwere ike iweda n'ala dị nkọ. Ọ dị mkpa iji nyochaa metric njide ndị na-ege ntị ka ha ghọta ihe kpatara mbelata ndodo ndị na-ege ntị na ọwa gị. Ị nwere ike ịmatakwu gbasara njide ndị na-ege ntị na taabụ nyocha n'okpuru ngalaba nyocha. Ị ga-enwe ike ịchọta ọnụ ọgụgụ kasị elu na ndagwurugwu na ọnụ ọgụgụ njide ndị na-ege ntị, nke nwere ike jikọta ya na isi ihe dị na vidiyo. Enwere ụzọ ụfọdụ ị ga-esi adọta uche ndị na-ege gị ntị n'ime nkeji iri na ise mbụ nke vidiyo gị.
Ka anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ha.
Bịarute ebe ahụ ngwa ngwa: Ọ bụrụ na vidiyo gị na-akọwa ụfọdụ isiokwu dị mgbagwoju anya ma ọ bụ na-enye nkuzi na ihe, ndị na-ege ntị chọrọ ịbanye na ọdịnaya ozugbo. Ị nwere ike mechaa gbanyụọ ndị na-ekiri ya ma ọ bụrụ na ị nwetaghị isi ọdịnaya ngwa ngwa.
Wepu egwu mmalite: Ọ bụrụ na mmalite nke vidiyo gị dị ogologo, mgbe ahụ ndị na-ekiri nwere ike hapụ ọwa gị. Na mgbakwunye na nke a, ụfọdụ ndị na-emepụta ọdịnaya na-etinye oge dị mma na-arịọ ndị na-ekiri ka ha "pịa akara ngosi mgbịrịgba". Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya idebe intro dị mkpụmkpụ wee nye ntakịrị nlele nke ihe vidiyo gị ga-ekwu maka ya.
Ejila Pịa baits: Ọ dị mkpa iji aha vidiyo ziri ezi na thumbnails na-eduhie ndị na-ekiri ya. Ọ bụrụ n'ịmepụta ọdịnaya clickbait, ndị na-ekiri ha ga-ewe iwe ma nwee ike ha agaghị alaghachi na ọwa gị ọzọ. Ụzọ ọzọ ị nwere ike isi kpasuo mmasị nke ndị na-ekiri gị bụ site n'igosi teaser nke njedebe nke akụkọ vidiyo.
Otu esi abawanye oge nche maka ọwa YouTube gị
Ọ bụrụ na ndị na-ekiri na-etinye oge dị ukwuu na vidiyo gị, mgbe ahụ, YouTube algọridim ga-eme ka ọwa gị na vidiyo pụta ìhè na nchọta ọchụchọ. YouTube kọwakwara n'oge gara aga na ọ ga-elekwasị anya na vidiyo na-abawanye oge nnọkọ ndị na-ekiri na YouTube. Ọ na-eburu n'uche ọ bụghị naanị vidiyo na-esote onye onye ahụ lere ka o lechara vidiyo gị, kama oge nlele vidiyo na-esote mgbe nke ahụ gasịrị. Enweghị otu atụmatụ enwere ike itinye n'ọrụ iji welie oge nche maka ọwa gị. Otu n'ime ụzọ ahụ bụ ịzụta awa elekere YouTube. Ịnwekwara ike iji ndụmọdụ ndị a na njikọ ịzụrụ awa elekere, iji mee ka oge elekere ọwa gị dịkwuo elu yana oge nche nnọkọ nke ndị na-ekiri.
1. Mee ka intro nke vidiyo gị dị ike ma na-adọrọ mmasị
Ọ dị mkpa ijikọ ndị na-ege ntị site na mmalite. A na-ekwukarị na sekọnd iri na ise mbụ nke vidio ahụ dị oké mkpa n’ịdọta uche ndị na-ege ntị. Akwụkwọ egwu YouTube nwere ntụnye ụfọdụ maka ịme intro ike, nke nwere -
Ihe na-adọrọ adọrọ nke mbụ: Akụkụ mbụ nke vidiyo kwesịrị ịbụ nke na-adọrọ adọrọ, ma ọ bụ site na iji àgwà na ozi ma ọ bụ site na ihe ngosi.
Soro ndị na-ekiri ihe na-akpakọrịta: Ị kwesịrị ịgbalị ịgwa ndị na-ekiri ya okwu ozugbo, ma na-ezo aka na ha n'otu n'otu kama dị ka ndị na-ege ntị.
kpalite ọchịchọ ịmata ihe: Ị nwere ike ime ka ndị na-ekiri ya chọsie ike site n'ime ihe ma ọ bụ ịjụ ha ajụjụ.
Nhụchalụ clip: Ị nwere ike igosi obere nlele vidiyo nke dị n'okpuru 15 sekọnd. N'ụzọ dị otú a, ndị na-ege ntị maara ihe ha ga-atụ anya ya.
Ndị na-ege gị ntị nwere ike ịrapara n'ahụ ma lelee ọdịnaya gị mgbe ị na-eji akụkụ ọdịnaya nwere ọdịnaya nke vidiyo na mbụ.
2. Ejila clickbait
Ọ bụ ihe a maara nke ọma na pịa baits adịghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye oge nche na vidiyo gị. Ọtụtụ mgbe, ha ga-enwe mmetụta dị iche dịka ndị na-ekiri ga-achọ ọdịnaya ndị ọzọ ma ọ bụrụ na i meghị nkwa ahụ. Mgbe ị na-enye thumbnail na aha maka vidiyo, ị kwesịrị ịgbalị ịnye ndị na-ege ntị ụfọdụ ihe ha ga-atụ anya na vidiyo ahụ. Ịmalite vidiyo nwere akara ngosi mara mma ma ọ bụ intro nwere ike iyi ihe dị mma, mana isi ihe bụ iji ruo n'isi ngwa ngwa.
3. Jiri atụmatụ isi na vidiyo
YouTube nwere atụmatụ mara mma nke na-enye gị ohere ịme isiakwụkwọ. Isiakwụkwọ abụghị naanị ihe dị mma maka ịkụda vidiyo dị ogologo n'ime akụkụ, mana ọ na-enye ndị na-ekiri ya ohere ịhụ ihe ga-abịa na vidiyo ahụ. Mgbe ịchọrọ itinye atụmatụ isiakwụkwọ na vidiyo gị, ọ dị mkpa ikpebi akụkụ vidiyo. Akụkụ ma ọ bụ isi ọ bụla kwesịrị inwe mmalite dị mma yana akụkọ na-atọ ụtọ. Ịmepụta nkọwapụta siri ike nke isiakwụkwọ mbụ ga-aba uru nke ukwuu na nke a. Nzọụkwụ ọzọ ị nwere ike ime bụ ịgbakwunye isiakwụkwọ ndị dabere na akara oge. Otu a, ndị na-ekiri nwekwara ike ịgbanwe gaa na stampụ oge dị iche iche iji lelee akụkụ ụfọdụ nke vidiyo ogologo.
4. Tinye nkwụsịtụ ụkpụrụ
Vidiyo gị kwesịrị ịdị na-amasị ndị na-ekiri ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye oge nche gị. Iji usoro nkwụsịtụ nwere ike ịbụ atụmatụ bara uru maka ịme vidiyo na-eme ka ndị na-ekiri na-etinye aka. Ndị mmadụ na-enwekarị ike ọgwụgwụ mgbe ụdị ihe nkiri na akụkọ dị otú ahụ na-emegharị na vidiyo. Usoro nkwụsịtụ ụkpụrụ dị ka ịgbanwe akụkụ igwefoto, eserese ihuenyo na B-roll nwere ike ijide uche ndị na-ekiri ya. Nkwụsị ụkpụrụ bụ n'ezie usoro na-agbanwe otu omume, echiche, ma ọ bụ ọnọdụ. A na-akwado usoro a site na akparamaagwa omume na mmemme neuro-linguistic. Mgbe ị na-etinye ihe nkwụsị ụkpụrụ, ọ na-emepụta ihe ngosi na akụkọ na-agbanwe mgbe niile ma na-eme ka ndị na-ekiri ha nwee mmasị.
5. Nyocha asọmpi na nyocha isiokwu
Enweghị ike ileghara uru isi okwu dị na ọdịnaya vidiyo anya, nke mere na ọ dị mkpa iji nyochaa isiokwu kpọmkwem maka YouTube mgbe ị na-ebipụta vidiyo gị. Ị nwere ike nyochaa mkpụrụokwu site na iji ngwa okwu. Naanị ihe ị ga-eme bụ pịnye isiokwu metụtara ọdịnaya wee chọpụta mmasị ndị na-ege ntị dabere na olu okwu okwu. Ị nwere ike ịme nyocha isiokwu site na iji ntụnye zuru ezu na YouTube.
Ekwesịrị ịme nyocha asọmpi site n'oge ruo n'oge iji chọpụta ụdị ọdịnaya nke ọwa asọmpi na-eke. Ntụle asọmpi bara uru nke ukwuu n'ịchọpụta maka mkpado vidiyo, mkpụrụokwu na nkọwapụta. Enwere ike iji ozi ewepụtara na nyocha asọmpi iji mepụta nghọta nke ndị na-ege ntị. Ọ na-enye aka n'ịchọta oghere ọdịnaya nke ị nwere ike mejupụta na ọdịnaya vidiyo gị.
6. Jiri akụkọ akụkọ na vidiyo gị
Ụzọ mara mma iji mee ka ndị na-ekiri na-etinye aka na vidiyo gị bụ ịmepụta vidiyo ụdị akụkọ. Iji akụkọ ihe mere eme nwere ike ịbụ ezigbo echiche maka ndị na-ekiri ihe na-achọ ka a na-ekpori ndụ mgbe ha na-amụ ihe. Ị nwere ike iche echiche maka ụzọ ọhụrụ na nke pụrụ iche iji nyefee ọdịnaya gị n'ụdị akụkọ. Nke a ga-eme ka ndị na-ekiri ha nwee mmasị na ha ga-anọgide na-ekiri vidiyo gị, na-abawanye oge nche na usoro ahụ. Mgbe ị na-emepụta vidiyo, cheta ịme ọdịnaya na-atọ ụtọ ma na-akụziri gị ihe n'otu oge. Ọ dị mkpa icheta akụkọ ahụ n'ụdị akụkọ ma n'ụdị ngosi igwefoto, n'agbanyeghị ogologo oge vidiyo ahụ.
7. Soro ndị na-emepụta ọdịnaya jikọọ ọnụ
Ụzọ mara mma isi na-abawanye oge nche na YouTube bụ site n'imekọrịta ndị nwere otu echiche bụ ndị ghọtara ebumnuche nke ika gị. Mgbe gị na ndị okike ọdịnaya ndị ọzọ na-emekọ ihe, ị nwere ike ịdọta ndị na-ekiri ọhụrụ wee gbasaa ntọala ndị na-ege gị ntị. Nke a na-enye aka n'oge nche gị, ọ na-enyekwa aka n'ịbawanye oge nche nke ndị na-ekiri ka ha na-pịa ọdịnaya yiri nke ahụ na ọwa onye ọrụ gị. Ekwesịrị ka a na-emeso mmekorita ndị a dị ka mmekorita ọ bụghị dị ka ahịa mmetụta. Ọ bụ ezie na ịre ahịa influencer bụ ihe niile gbasara ịnweta ndị na-ege ntị ọhụrụ maka ọrụ, imekọ ihe ọnụ bụ ihe ziri ezi ma dabere na ụkpụrụ nkekọrịta.
8. Ogologo vidiyo
Ogologo oge na-emetụtakwa oge nlele nke vidiyo. Ọ bụ ezie na vidiyo dị ogologo ga-enwe ike ịnweta oge nlele dị ukwuu na naanị ndị na-ekiri ya, vidiyo dị mkpụmkpụ ga-achọ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ekiri ya iji nweta otu oge nlele. Vidiyo dị ogologo ka mma maka ịbawanye oge nche, agbanyeghị, isi ihe bụ na ha kwesịrị ịdị na-akpakọrịta maka ndị na-ekiri ya. Ekwesịrị imepụta vidiyo ndị a toro ogologo na-eburu n'uche ndị na-ege ntị. Ọ ga-aba uru ịgbatị ụfọdụ ọdịnaya vidiyo gị dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ. Ị nwere ike iche ụzọ pụrụ iche iji gbasaa na ọdịnaya. Ozugbo enwere ọganihu nke ogologo ọdịiche dị ogologo, ị nwere ike ihichapụ otu ọdịnaya dị n'ụdị vidiyo dị mkpirikpi.
9. Mepụta usoro vidiyo
Ụzọ ọzọ dị mma isi na-abawanye oge nche gị bụ site na ịmepụta usoro vidiyo. Oge nlele nke usoro vidiyo chịkọbara nwere ike ibu ibu. Nke a bụ n'ihi na ndị na-ekiri ga-anọgide na-ekiri vidiyo ndị metụtara ya. Usoro isiokwu a nwere ike ilekwasị anya n'otu isiokwu ma ọ bụ ihe ịma aka. O nwedịrị ike ịbụ n'ụdị akụkọ. Ọ bụrụ na usoro vidiyo gị na-etinye aka, ndị na-ekiri ga-aga n'ihu na-alọghachi maka ọdịnaya gị, nke ga-abawanye awa elekere ka oge na-aga. Mgbe ị na-ahọrọ isiokwu nke usoro vidiyo, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ vidiyo ndị nwere echiche kachasị. Ị nwere ike iji vidiyo ndị a dịka ntọala maka ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ.
10. Jiri YouTube Analytics ịghọta obere na nnukwu ele
Ị nwere ike nweta ezigbo nghọta gbasara ọwa gị site na ngalaba nyocha YouTube. Ị nwekwara ike nweta ozi ọhụrụ gbasara nnukwu echiche na micro na ọwa gị. Nchịkọta YouTube na-enye gị ohere ịlele nlele n'ụbọchị na oge. E wezụga nke a, e nwekwara otu nhọrọ anya na data na videos n'onwe ha. Ịkwesịrị iji ngalaba nyocha iji chọpụta nkezi oge nkwụsị nke ndị ọrụ. Nke a ga-enyere gị aka n'ịzụlite nghọta nke ụzọ ị nwere ike isi mee ka ndị na-ege ntị nwekwuo mmasị na vidiyo gị n'ọdịnihu. Naanị otu ị ga - esi mee ka ọdịnaya dịkwuo mma maka ndị na-ekiri ya bụ site n'ịghọta mkpa ha, nke bụ ihe nchịkọta YouTube na-enye. Ị nwere ike iji ozi ahụ hazie ọdịnaya gị dịka mkpa ndị na-ege ntị si dị.
11. Ịchọpụta oge kwesịrị ekwesị iji biputere
Vidio gị kwesịrị ka achọpụta ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye oge nche maka ọwa gị. Maka nke a, vidiyo ga-egosi na ndụmọdụ ọchụchọ n'oge kwesịrị ekwesị. Dabere na nyocha ịntanetị, oge kacha mma iji bipute ọdịnaya na YouTube bụ n'etiti ehihie. Nke a bụ n'ihi na a na-ewere oge nlele kacha dị ka elekere asatọ nke abalị. Iji hụ na vidiyo gị pụtara n'oge awa nlele kacha elu, ị kwesịrị ịhapụ oge zuru oke ka ha wee depụta aha ha. Atụmatụ a na-arụ ọrụ nke ọma n'ime ụbọchị izu, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ibugo vidiyo na ngwụcha izu, a ga-etinye usoro dị iche. Na ngwụcha izu, ọ ga-aka mma ibipute vidiyo ntakịrị oge ka ịntanetị na-adịkarị elu na ngwụcha izu.
12. Jiri YouTube listi ọkpụkpọ
Maka ịbawanye oge nche, onye na-ekiri adịghị mkpa ikiri vidiyo gị. Oge nche nwere ike ịbawanye ma ọ bụrụ na onye ọrụ na-ekiri ndepụta ọkpụkpọ gụnyere vidiyo nke ndị ọzọ. Ịmepụta ndepụta ọkpụkpọ nwere ike ịbara gị uru nke ukwuu, ebe ọ na-eduzi ndị nwere ike ilele anya ka ha nweta ahụmịhe nlele ahịrị. Nke a na-enye gị ohere imetụta mkpokọta oge nche nke ndị ọrụ. Maka ịmepụta listi ọkpụkpọ, naanị ihe ị ga - eme bụ ịhazi vidiyo gị n'usoro bara uru, yana mmemme dị mkpa, isiokwu, ihe ngosi na usoro niile agbadoro n'otu. Listi ọkpụkpọ na-abawanye ohere nke vidiyo gị ịpụta na nsonaazụ vidiyo atụpụtara.
Mgbe ị na-eji njirimara listi ọkpụkpọ, ọ ga-adị mma ịkwalite ha maka ahụmịhe nlele ka mma. Ị nwere ike iji njirimara nke mmalite na njedebe oge ka akọwapụta isi ihe 'in' na 'out' nke vidiyo. Ị nwere ike ibelata intros na outros nke vidiyo dị na listi ọkpụkpọ gị iji mepụta ahụmịhe enweghị nkebi. Ọzọkwa, cheta igosi ndepụta ọkpụkpọ n'ime ndị egwu agbakwunyere yana ibe ọwa YouTube. Ị nwekwara ike ijikọ na ibe ndepụta ọkpụkpọ gị site na nkọwa.
13. Jiri Slates na kaadị ngwụcha
Enwere aghụghọ ị nwere ike were mee ka ndị mmadụ gaa n'ihu na-ekiri vidiyo gị kama ịpịpụ ngwa ngwa. Otu n'ime aghụghọ bụ iji atụmatụ kaadị na YouTube, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịgbakwunye njikọ na ihuenyo vidiyo. Njikọ vidiyo ndị a n'ụdị kaadị jikọọ na vidiyo, ndepụta ọkpụkpọ, ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ. Mgbe ị na-eji njirimara kaadị YouTube, ọ ga-abụ ihe dị mma idowe kaadị ebe ndị na-ege ntị na-adabakarị. Nke a ga-enye onye na-ekiri ya ohere ikiri vidiyo metụtara ya kama ịkwụsị oge nlele ha. Iji End Slates bụ nhọrọ ọzọ dị mma maka iduzi ndị na-ekiri vidiyo ọzọ metụtara ya.
14. Tinye Teasers
Ọtụtụ mgbe, ndị na-ekiri gị nwere ike ịpụ apụ mgbe sekọnd ole na ole gasịrị, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ vidiyo dị ogologo. Enwere ụzọ iji hụ na ndị na-ekiri gị na-anọ ogologo oge. Ị nwere ike ịtụle itinye teasers na mmalite vidiyo gị, nke na-achịkọta isi vidiyo gị. teaser ndị a ga-enye ndị na-ekiri ihe echiche banyere ihe ha nwere ike ịtụ anya na vidiyo ahụ.
Ọ bụrụ na ejiri ya nke ọma, YouTube nwere ike ịbụ nnukwu ikpo okwu maka ịmepụta njikọ mmetụta uche na ndị na-atụ anya ikiri. Mgbe ị na-eji usoro ndị a maka ịba ụba oge nche, ọ bụghị naanị na ị ga-enwetakwu ndị debanyere aha na nlele, mana ọ ga-emetụtakwa mmekọrịta ndị na-ekiri gị nwere na ika gị. Ị nwekwara ike zụta awa elekere YouTube site na YTpals wee jiri usoro ndị a na njikọ, na-abawanye oge nche gị nke ukwuu. Site na ọrụ YTpals 'Zụrụ YouTube Watch Hours, ị ga-enwe ike iru awa 4,000 nke oge nlele na YouTube, nke ga-enye gị ohere ịme ego ọwa gị. Ọrụ ahụ ga-amalite n'ime awa 24-72 nke itinye iwu.
YTpals na-enye ọtụtụ ọrụ adịchaghị mkpa iji mee ka ọwa YouTube gị na-aga nke ọma. Ka ịmatakwu, kpọtụrụ anyị taa!
Ndị ahịa 500,000 + tụkwasịrị obi
Hụ ihe ndị ahịa anyị na-ekwu banyere YTPals
E tinyela oge awa YouTube na ụgbọ ibu gị.
Anyị chere na ị nwere ike ịmasị
Echiche 1000 ($ 20)Echiche 5000 ($ 60)Echiche 10000 ($ 100)Echiche 25000 ($ 200)Echiche 50000 ($ 350)Echiche 100000 ($ 600)
Mmasị nke 100 ($ 13.50)Mmasị nke 200 ($ 20)Mmasị nke 300 ($ 25)Mmasị nke 600 ($ 40)Mmasị nke 1200 ($ 70)Mmasị nke 2500 ($ 140)Mmasị nke 5000 ($ 270)Mmasị nke 10000 ($ 530)Mmasị nke 15000 ($ 790)Mmasị nke 20000 ($ 1050)Mmasị nke 30000 ($ 1550)
100 mbak ($ ​​10)250 mbak ($ ​​20)500 mbak ($ ​​30)1000 mbak ($ ​​50)2000 mbak ($ ​​80)5000 mbak ($ ​​130)10000 mbak ($ ​​250)
Ngwaahịa gara nke ọma tinye na ụgbọ ibu